एकाविहानै भरतपुरबाट आयो यस्तो ताजा अपडेट, देवी ज्ञवाली अगाडी !
ARCHIVE, POLITICS » एकाविहानै भरतपुरबाट आयो यस्तो ताजा अपडेट, देवी ज्ञवाली अगाडी !
चितवनको भरतपुर नगरपालिका-१९ को मतगणना सुरु भएको छ । सर्वदलीय सहमतिपछि शुक्रबार राति साढे १० बजेबाट मतगणना सुरु भएको हो । गत २१ वैशाखमा भएको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि भरतपुर–१९ मा शुक्रबार पुनः मतदान भएको हो ।
आधिकारिक अपडेट प्राप्त नभएपनि देवी ज्ञवाली अगाडी भएको बुझिएको छ । यस अघि पनि देवी ज्ञवालीले नै लिड गरेका थिए । यसपाली रेणु दाहाललाई पहिलाको तुलनामा कांग्रेसी भोट नआएको बुझिएको छ ।